MiniBatt, nke a bụ ka igwe ikuku na-akwụ ụgwọ maka ekwentị na-arụ ọrụ | Akụkọ akụrụngwa
MiniBatt, nke a bụ otu esi arụ ọrụ sistemụ ikuku maka ekwentị na-arụ ọrụ
Alfonso De Frutos | | Ngwa
Ikuku Nchaji usoro niile ọnụma. Inwe ike ịkwụ ụgwọ ekwentị gị n'ejighị eriri dị ezigbo mma. Ma nke a bụ ebe ọ na-abata Obere, mmalite nke Spanish nke juru anyị anya n'oge IFA na Berlin na ngwaahịa ọhụrụ ya na nke na-adọrọ mmasị nke ga-enye gị ohere ịkwụnye iPhone 6 ma ọ bụ iPhone 6 Plus na-enweghị eriri na ekele maka okwu PowerCase ya na ọtụtụ chaja ikuku na-adọrọ mmasị.
Gaghị agbaghara Jordi Gilberga, CEO nke ụlọ ọrụ, onye na-akọwa anyị na vidiyo niile nke MiniBatt ngwaahịa dị na ahịa!
Minibatt, usoro ikuku ikuku na-akwụ ụgwọ na-apụta maka iji ha mee ihe
Tupu ị kwuo maka azịza nke ụlọ ọrụ a, kwuo nke a MiniBatt bụ ụlọ ọrụ Spanish, nke dị na Barcelona, ​​nke ahụ ewepụtawo ngwaahịa ya niile n'ókèala Spanish, ihe kwesịrị ịja mma ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na mba anyị anaghị apụta maka ụlọ ọrụ teknụzụ ya.
Dịka ị ga-ahụ na vidiyo ahụ, akara nke ngwaahịa ndị Jordi Gilberga gosipụtara dị ezigbo mma, ọkachasị pụta ìhè PowerCASE, ikpe maka iPhone 6 na 6 Plus nke ga-enye gị ohere ịji ekwentị gị na-enweghị eriri site na ịnakwere teknụzụ PMA na Qi na-akwụ ụgwọ.
Ikpe ahụ na-enye mmetụ dị ụtọ nke ukwuu ma jiri ihe kachasị mma rụọ ọrụ, na-egosipụta mgbawa Texas Instruments iji mee ka ọtụtụ ohere nke MiniBatt PowerCASE, ikpe nkwụnye ụgwọ ikuku maka iPhone 6 na 6 Plus.
Ọzọ nke kasị akpali ngwaahịa bụ MiniBatt Guzosie, a wireless Nchaji isi na atụmatụ 3 coils na-ekwe ka ngwaọrụ na-ana site ọ bụla ọnọdụ, n'agbanyeghị ma ekwentị metụrụ dum Nchaji isi.
Anyị enweghị ike ichefu Fi60 na Fi80, Chaja ikuku na-anaghị ahụ anya nke enwere ike itinye ya na mpaghara dị iche iche maka ndị ọkachamara. Ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ bụghị echiche ọjọọ ịwụnye otu n'ime chaja ndị a na tebụl ọrụ!
Kedu ihe ị chere maka azịza MiniBatt?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » MiniBatt, nke a bụ otu esi arụ ọrụ sistemụ ikuku maka ekwentị na-arụ ọrụ
Ntinye aka na-enweghị ikuku. Ikuku bụ wifi rawụta, nke a dị ka nke nke ogologo oge ọgbụgba ọkụ eze eze. Emekpala okwu
Ihe ngosi 7 Galaxy Note na-eweghachite Samsung ga-agbanyụ ha nke ọma
LG V20 agaghị ere ahịa na mba Europe ọ bụla